New technology imd China electroplated OEM cust ...
ọhụrụ ngwaahịa OEM ákwà ekwentị ikpe n'ihi Iphone m ...
Mobile ekwentị ikpe n'ihi na iphone 7 ikpe mmịfe na ...
IMD electroplated yi tpu + pc ekwentị ikpe utari ...
OEM tpu mobile ekwentị shell-
ọkachamara ewute enwu mobile ekwentị ikpe ...
Ntak emi Họrọ The Iml Phone Case?
kasị nso nnyefe
IML technology iji PITA film nyak nakawa etu esi. Ga-eme ka n'aka na obere deliery oge.
OEM imewe. Agba na ụkpụrụ ga-agbanwe ọ bụla n'oge mmepụta.
IML PITA FILEM
PITA nkiri bụ isi technology nke IML. Ezigbo na ndị mara mma ile anya, excellet ọkọ-eguzogide.
PITA Nkiri-The ụkpụrụ ibi akwụkwọ n'ime. Mgbe ịjụ oyi, Always egbuke egbuke ma na yi.